Bangiyada ayaa si dhaqso leh ushaqeyn doona qeybta labaad ee maaliyada mashruuca | RayHaber | raillynews
HometareenkaMaalgelinta mashruuca, bangiyada ayaa si dhakhso ah u socon doona qeybta labaad
Maalgelinta mashruuca, bangiyada ayaa si dhakhso ah u socon doona qeybta labaad
05 / 09 / 2017 tareenka, GUUD, hyperlinks, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
Sanadkan 6 macaamil ganacsi bishii wuxuu ahaa qiimihiisu yahay $ 4 bilyan, halka mugga saddexda rubuc ee uu yahay $ 2.5.
Ilaa hadda, maalgelinta mashruuca tamarta tamarta ayaa ah mashruuca mashaariicda horumarinta iyo kaabayaasha ah sannadkan. Madaxweyne kuxigeenka Garanti Bank Ebru Dildar Edin ayaa saadaaliyay in mugga wadajirka ah ee sanadkaan uu sanadkaan ku jiri doono 11 bilyan doolar, boqolkiiba 70 boqolkiiba mashaariicda la dhammaystiray ayaa ka iman doona kaabayaasha ". Sannadkan, iyada oo la tixgelinayo saameynta aftida ayaa sidoo kale hoos u dhigaysa maalgelinta mashruuca maalgashiga mashruucan ayaa ka muuqda mid ka mid ah isgaadhsiinta Edin, taas oo muujinaysa in laga bilaabo Juun, arrimuhu waxay xawaareynayaan "Qeybta labaad, qeybtii hore way xiri doontaa," ayuu yidhi.
Inkasta oo saxiixyada kama dambaysta ah ay ka tagayaan 2018, Bridge Bridge iyo Waddada Waqooyiga Marmara ayaa lagu maalgelin doonaa miisaaniyada rubuc dhamaadka sanadka. Gudoomiyaha Wakiilka Garanti Bank, oo ah geeddi-socodka sannadlaha ah ee 2, qaar ka mid ah mashaariicda waaweyn ee dadweynaha, iyo sidoo kale mashaariic dhexdhexaad ah oo lagu horumarinayo dhaqaalaha mashruuca, oo ay ka mid yihiin horumarinta xaaladaha suuqa, iyo saadaaliyay in dib-u-maalgelintu kor u kici doonto inta suurtogal ah.
Waxaan kala hadalnay Madaxweyne Ku-xigeenka Madaxa Garanti Bankiga Ebru Dildar Edin oo ku saabsan dhibta ugu dambaysa ee maaliyadda mashruuca. bangiyada maaliyada mashruuca, sida ay size ee Turkish Banks Association of Turkey maray 80 billion dollars. Qadarka lacagta lagu siiyey bilihii ugu horreeyay ee 6 ee sanadkaan wuxuu ahaa XYUMX bilyan oo doolar.
Tiradaas, 3.2 bilyan oo doolar ayaa ka yimid shaqooyin cusub iyo 800 million oo dollar ayaa ka yimid dib udhigista. Ebru Dildar Edin, "Shaqooyinka cusub waxay ahaayeen mashaariicda kaabayaasha ah. Badankood waxay ahaayeen wadooyinka waaweyn. Qaybta hore ee sanadkan, mashruuca waddada weyn ee 2 dollar ayaa la maalgeliyey. Amaahda 700 Milyan Milyan ee Waddada Marmara ayaa ku jirta mugga. 4 bilyan oo doollar oo dollar ah ayaa lagu isticmaalay macaamiil iibsi. 1, bilyano dollar oo lagu maalgelinayo tamarta, halka bilihii ugu horreeyay ee 2016, tiradaasi waxay hoos u dhigtay 6 Milyan Dollar.
Dib uhabayntu waxay ahayd ajandaha qaybta tamarta. Ka dib markii bishii koowaad ee 6, dhaqdhaqaaq ayaa mar kale bilowday. 2 ayaa bil walba maalgalinaysa macaamiisheeda 2.5 oo ay ka mid tahay dib u maalgelinta Madaarka Antalya iyo Mashruuca Isbitaalka Ikitelli PPP. "
Cabbirka wadarta maalgalinta mashruuca ee la xiray sannadkii hore wuxuu ahaa XYUMX bilyan oo doolar. Cabbirka maalgelinta, oo la xidhay qeybtii hore ee sanadkan, waa bilyan doolar bilyan. Tirooyinkan ayaa horay usoo kordhay sannadkii hore. Marka la eego filashooyinka nambarkiisa, Edin ayaa sameeyey qiimeyntan soo socota: horgör Waxaan saadaalinaynaa in ay jiri doonto miisaan kale oo ah 16 bilyan oo dollar qeybta labaad, inkastoo qaar ka mid yihiin dib u maalgelinta. Waxaan u maleyneynaa inaan sannadku xidhnaanayno wadarta miisaanka 4. Waxaa jira mashaariic lagu xiri doono 7, oo qandaraaskiisu maalgeliyo sanadkan. YEKAs, dhammaadka sanadkan, laakiin laga yaabo bilawga sanadka soo socda, Jidadka Waqooyiga Marmara, Canugale Bridge, Isbitaalada 11 sannadkii, waxaan horayba u saadaalin karnaa mugga 2018 bilyan oo doolar. "
Wiilkii ugu fiicnaa sanadka wuxuu noqon doonaa rubucii ugu dambeeyay "
tirooyinka Annual dalka Turkiga marka loo eego mashaariicda iyo mugga maaliyadda habeysan in 2015 34.6 billion dollars. Marka laga reebo buundooyinka dayuuradaha iyo maalgelinta, maalgelin cusub oo ah $ 23.5 $ ayaa la bixiyaa sanadka. Tirada guud ee lagu gaarey 2016 waa bilyan doolar bilyan.
Edin ayaa sanadkan 2015 ku tilmaamay sannad-weyn aad u weyn oo ka mid ah miisaaniyadda 34.6 ee dollar, taas oo lagu gaadhay saamaynta mashaariicda la qabtay wakhtigaas. "Waxa aan fileyno dhamaadka sanadkan waa 11-13 $. Jaantuskan, waxaynu aragnay hoos u dhac ku yimaada rabitaanka maalgashiga, marka laga reebo horumarinta gobolka, aftida iyo shaqooyinka waawayn horey u soo bandhigeen. Maalgeliyuhu ma rabo inuu qaado wax tallaabo ah haddii uu arko cad. Laakiin waxaan si fudud u sheegi karnaa in qeybtii labaad ee sanadka ka fiicneyd qeybtii hore. Dhammaadkii bishii June, miisaankii 4 bilyan oo doolar ayaa la sameeyay waxaana jiray dhaqdhaqaaq halis ah laga bilaabo maalintaas ilaa dhammaadka August; Maalgelinta 2.5 bilyan oo doolar oo ay ka mid yihiin dib-u-maalgelinta Madaarka Antalya iyo Mashruuca Isbitaalka Ikitelli PPP ayaa la xidhay. Shaxdan, kaliya 400 malyuun oo doolar ayaa dib loo maalgeliyay. Seddexdii bilood ee ugu dambeysay sanadkan wuxuu noqon doonaa rubuca ugu fiicnaanta sanadka waana uu ka gudbi doonaa si dhakhso ah. Seddexdii bilood ee u dambeysey ayaa badbaadin doonta sanadka ".
"Waxaannu aragnaa dhaqdhaqaaq sida 2015 oo ku yaal 2020 kadibna"
'Goorma ayuu sanadka weyn ka dib 2015 yimaadaa maalgelinta mashruuca?' Edin ayaa yiri, "Uma maleyno rajo noocan oo kale ah sanadka doorashada 2018 iyo 2019. Sanadihii doorashada ayaa si caadi ah u socday. Tan waxaa lagala hadli karaa 2020 kadibna. Si kastaba ha ahaatee, si loo gaaro munaasabadan, ma aha oo kaliya qaybta gaarka loo leeyahay laakiin sidoo kale mashaariicda dadweynaha ee waaxda dawladdu waa inay noqdaan kuwo firfircoon. 3. Garoonka diyaaradaha ayaa soo galaya cayaar, haddii xaaladaha suuqyada ee xilligaasi ay awood u yeeshaan dib u maalgelinta halkaa, waxaan ka hadli doonaa qiyaasaha kala duwan ". 3. Maalgelinta garoonka diyaaradaha wuxuu ahaa 4.5 bilyan euro.
Inkastoo ay muujinayso xiisaha uu leeyahay Kuuriyada Koonfureed ee Eximbank ee maal-galinta mashruuca Chanakkale Bridge, Madaxweyne ku-xigeenka Garanti Bank-ka Ebru Dildar Edin ayaa sheegay, inaan arkeyno bangiyada shisheeye ee maal-galinta wadooyinka horay. Keliya Deutsche Bank ayaa ka qaybgashay maalgelinta gawaarida Gebze-İzmir. Hadda, Eximbank Kuuriya ayaa ku dhawaaqday inay doonayso in ay bixiso 2.5 boqolkiiba lacagta maalgelinta ee 50 Bridge ee Xanaanada Kunoolajiyanka. Kuwa soo hadhay waxay ku biiri doonaan bangiyada Turki ee 50. Waan kulmi doonaa bisha Sebtembar. Seddexdii bilood ee hore ee 2018, waxaa mar hore lagama maarmaan u ah inay tallaabo qaadaan Sebtembar si ay u sameeyaan saxiixyada ugu dambeeyay.
Edin, qandaraasyada Turkiga, maal-gashadayaasha ajnabiga ah ayaa si ku-meel-gaar ah u kobcaya 'ayuu yiri hoos-u-marin kasta mashruucyada waawayn iyo mashaariicda kaabayaasha si guul leh hoos loogu dhigo
Hal Miisaaniyadda gacanta ee iibinta iyo maalgelinta mideynta "
Edin, sannadkan, miisaankoodu hooseeyo macaamilka iibka iibka ee leh miisaaniyadda dhaqaalaha gaarka loo leeyahay halkii uu ka doorbidi lahaa deyn-celinta waa saamaynta maal-galinta, ayuu yiri. Edin ayaa sidoo kale qiimeeya suurtogalnimada in ay macaamil ka noqoto iibsashada iyo isdhexgalka ee 2018 halkaa oo la isticmaali karo kanaalka bangiga, waxayna u maleyneysaa in qaybta tamarta ay horey u socoto.
Edin ayaa sheegay in ay filayaan in la isku daro qaybaha tamarta. Edin ayaa sii waday: iz Waxaan arkeynaa dhaqdhaqaaqa mideynta oo abuuri kara iskuxirida u dhaxeeya maalgashadayaasha casriyeynta tamarta dib loo cusboonaysiin karo iyo maalgashadayaasha leh naqshadeeyaha kuleylka. Mashruucyo badan ayaa caqabad ku ah qiimaha. Kuwa raba inay ka saaraan culeyska deynta dibadda ka dibna ay u arkaan fursad wanaagsan oo ay ugu wareejiyaan kuwa doonaya in ay maalgashadaan. Maalgeliyeyaasha qaarkood ayaa bilaabay inay yimaadaan. Marka uu jiro macaamil, wuxuu isla markiiba bilaabaa inuu eego waxa maaliyadaha kale ay ku socdaan suuqa, haddii ay jirto fursad. "
"Garanti wuxuu sii wadaa saamiga suuqa 10-15 boqolkiiba
Mashruuca Garanti Bank ee maalgelinta amaahda maalgelinta wuxuu ku xiran yahay 13 bilyan oo doolar, halka Kaaliyaha Agaasimaha Guud ee Edinburgh leeyahay, banka Waxaan maalgelinay mashaariic waawayn oo ku saabsan 15-20 tan iyo sanadka. Sidaa daraadeed waxaan heysanaa lacag sanadkiiba mar. Waxaan ku qiyaasaynaa in koritaankayagu uu ku sii jiri doono xadka 3-5 sanadkiiba sababtoo ah dib u bixinta sanadkan. Qaybteena suuqyada ah ee shaqooyinka cusub sanad kasta waxay ku kala duwan yihiin boqolkiiba 10 iyo 15 boqolkiiba. Sannadkan waxaan xisaabin doonaa isla lacagta. Sidaa daraadeed, mugga in qaybta ka dhigi doonaa 11-13 bilyan doolar, waxaan heli doonaa ganacsi cusub oo ah 1-1.5 bilyan doolar. Iibsi lama filaan ah oo soo baxaya haddii aan ka hadalno maalgelinta, tirooyinkan ayaa isbedelaya. "
Qaybta tamarta, gaar ahaan dib-u-cusbooneysiinta, miisaaniyadda hadda ee Garanti waa mid aad u sareysa, iyada oo la-kaashado kaabayaasha iyo gawaarida ay ku badan yihiin kuwa cusub.
"Raashinka shisheeye ee ka jira Iskaashiga Dowladda iyo Ganacsiga waa mid furan oo tartan ah"
Edin wuxuu helay habka maalgelinta ee lagu aasaasay mashaariicda iskaashiga iskaashiga iskaashiga ah sida wanaagsan aad iyo aad u wanaagsan, waxaana uu yiri, "Wax badan sidaas maaha oo kaliya bangiyada Turki laakiin bangiyada kale ee ajnebiga ah ayaa ku biiray maalgelintan waxayna bilaabeen inay ka qayb qaataan maalgelinta. Markii ugu horeysay, waxaan ku aragnay baananka ajanabiga ah ee maaliyadda mashruuca. Mashruucyadan, dakhliga ayaa la gaarsiiyey sanado 18. Bangiyada shisheeye waxay tixgeliyaan maalgelinta PPP iyagoo ah khatarta khasnadda. Qiimaha ayaa sidoo kale waa tartan. Qiimaha deeq-lacageedkooda ayaa sidoo kale aad u macquul ah maalgashadayaasha ". Edin, oo ah xaddiga lacageed ee la siinayo mashaariicda isbitaal la leh Iskaashiga Dowladda ee PPP ee sanadka 3 ee 7.5 bilyan euro, ayuu yiri.
Tilmaan in ay jiri karto jidka tareenka ee aag kale oo bangiyada ay bixin karaan dhaqaalaha mashruuca, Edin ayaa yiri "baahi weyn oo laga qabo ganacsigan ayaa laga yaabaa in laga jawaabo.
Isagoo caddeeyay in qaabka isbeddelka PPP loo isticmaali karo dib u cusbooneysiinta dugsiyada iyo xabsiyada xilliga soo socda, Edin ayaa sheegay, isbitaal Dhaqaale cusbitaal oo lagu sameeyey qaabka iskaashiga PPP wuxuu ku xigaa 3-4 bilyan euro. Iyadoo xabsiga iyo Isku-duwaha Isku-xirka Isku-xirka (PPPs), cabbirka wuxuu gaari karaa XIDEENKA bilyan euro. "
"Maalgelinta YEKAs waa ilaa 2018"
Marka aan xusuusanno in dhibaatooyinka sida sicirka sicirka iyo qiimaha sicirka ee suuqa tamarta ay sidoo kale ka muuqatay dhinaca maalgelinta ganacsiga, Edin ayaa yiri, "Maalgashadayaasha jira waxay mudnaanta siinayeen mashaariicda hadda jira halkii ay cusubi lahaayeen. Baaxadda barnaamijka tamarta qaranka, hindisooyinka Solar YEKA iyo Wind YEKA, oo aan tixgelineyno mid aad u muhiim ah, ayaa la soo gabagabeeyay. Maalgelinta mashaariicdani lama dhammaystiri doono sanadkan, laakiin waxay heli doontaa 2018. Mashaariicda kale ahaayeen xaalad ka mid ah wax soo saarka ee Beecin, kuwaas oo lagu qaban doono dalka Turkiga duwan. Sidaa daraadeed, ka dib markii la aasaasay, suurtagalnimada iyo bixinta xaruntii la soo saaro, YEKA ayaa ka wada xaajoon doonta bangiyada mashruuca. 2018 qorraxda waxay joogi kartaa rubuca hore iyo dabaysha wareegga labaad. "
Looma ogola mashruuc aan degeneyn
Ebru Dildar Edin ayaa tusaale u soo bandhigay muhiimada ay leedahay in la sii wado dhaqaalaha mashruuca. Inkasta oo la ogaanayo suurta galnimada 2 HEPP ee Koonfurta Aegean, waxay ogaadeen in socodka biyaha ee gobolkaasi uu hoos u dhici doono isbeddelka cimilada ee caalamka .. Edin ayaa sheegay in marka hore Dhamaanteen, waa inaan ka shaqeynaa mustaqbalkiisa, mustaqbalka adduunka oo dhan: 'waan samayn doonaa, laakiin sababtoo ah ceelasha biyaha isbeddelka cimilada way isbedelayaan, sidaas awgeed mashruucu ma bixin doono dhibcaha' waxaan dhahnay. Ka dib markii la qabsoomay, dhismaha mashruuca ayaa laga tegey. "
Bangiga 7-8 wuxuu saxiixi doonaa mabaadi'da maaliyadeed ee joogtada ah
Horumarka Joogtaysan iyo guddoomiye ku-xigeenka Global Compact Turkey-xigeenka Guud ee Bank Garanti Manager Ebru Dildar Edin, 7 - bangiga 8 in dhawaan ay Caalamiga ah Compact Turkey diyaariyo iyo qaabka maalgelinta waara on maalgelinta bangiga noqon doonaa mabda'a qaar ka mid ah in halka taam dhawaaqista saxiixay sidoo kale Doono ayuu yiri.
Edin ayaa sidoo kale sheegay in kulanka la qaban doono dhammaadka Sebtembar, kulanka ayaa lagu qaban doonaa qaybta shirka, isaga oo sheegay in dhinacyadu ay ka qayb qaadanayaan.
Waxa uu rabaa inuu sameeyo alaab maaliyadeed
Ebru Dildar Edin ayaa sidoo kale sheegay in ay doonayaan in ay soo saaraan wax soo saarka maaliyadeed sanadkan waxaana ay diiradda saareen waxqabadka tamarta. Edin, oo ah alaab hal dhinac ah oo ka mid ah degmooyinka, gaar ahaan marka la eego cilmibaarista dadweynaha, ayaa sheegay. Waxa uu sheegay in ay ka shaqeynayaan kaliya oo kaliya amaahda balse sidoo kale abuuraya ilaha dhaqaale ee cusub ee bangiga. Edin ayaa yiri, "Waxaan, sida bangiyada Turkiga, ay deymankan ku hayaan xaashiyadaha dheelitirka. Si kastaba ha noqotee, bangiyada shisheeye ayaa tan ugu horreysa bixiya Kadibna waxay u iibiyaan maalgashado kale oo aan ahayn bangiyada. Waxaanu samaynay koox tan. Waxaan qiimeyn doonaa iibinta bangiyada shisheeye iyo maalgashadayaasha hay'adaha tayada leh. Sidaa daraadeed, waxaanu dhaqaajin doonaa deymahaas. Midda labaad waa inay bixiso xayiraad. Bixinta is-dhaafsiga ayaa ilaa hadda loo adeegsaday mashruuca 2. Ka dib marka maalgelinta mashruuca la dhameeyo, waxaa laga yaabaa inaan bixinno canshuur laga yaabo inay soo jiidato maalgashi kala duwan. Laakiin waa lagama maarmaan in la sheego in tani ay ku xidhan tahay sharciga iyo shuruudaha suuqa
Waxaa laga soo xigtay: Ece CEYHUN - waxaan www.dunya.co
Baananku waxay u tartamayeen ATM-yada xarumaha metro
Izmir, 5 waxay u ordi doontaa kuwa aan kari karin May
Bangiyada 3. wuxuu ku guuleeystay hindisada kooxda Itaş-Astaldi
3. safafyada bangiyada ee garoonka diyaaradaha
Jawaabta IPA si ay u maalgaliso TCDD Mashruuca Dayactirka Tareenka Xawaaraha Sare…
Kızılay - Çayyolu (M2) iyo Tandoğan - Keçiören (M4) metro mashruucyo tilmaam,,
Shiinaha oo laba jibbaaraya maalgashiga tareenada ee sannadka labaad
Mashruuca Isku xirka Nidaamka Wadada Wadooyinka ee Diyaaradda Esenboğa 2014 ih
Baku-Tbilisi-Kars Tareenka ayaa la furayaa qeybta labaad ee 2015
RayHaber 05.09.2017 Warbixinta Shirka
2. Shirkadda MMG R & D Abaabulka iyo Bandhigga 6 waxay ka bilowdaa Sebtembar